मेसीलाई यसरी विदाई गरे बार्साका र अन्य खेलाडीले.. | सबै खेल
मेसीलाई यसरी विदाई गरे बार्साका र अन्य खेलाडीले..
२३ श्रावण २०७८, शनिबार ०२:१८
पछिल्लो दुई दशक फुटबलका दुईवटा नाम एकअर्काका पर्यायका रुपमा रहे, मेसी र बार्सिलोना। तर, नचाहँदा नचाहँदै यी दुईको विछोड हुने भएको छ।
बिहिबार राती एक्कासी खबर आयो, ‘मेसी अब बार्सिलोनाबाट खेल्ने छैनन्।’ यो खबर बार्साले नै आफ्ना फ्यानहरुलाई दिएको थियो। ला लिगाको वित्तिय नियमका कारण सम्झौतामा सहमति भएपछि पनि मेसीले बार्सा छाड्नु परेको थियो।
लगभग पछिल्लो २० वर्षदेखि युरोपियन फुटबलमा बार्सा भनेको मेसी, र मेसी भनेकै बार्सा भनेर सबैजना अभ्यस्त थिए। पहिले पनि मेसीले बार्सा छाड्ने गाइँगुइँ नचलेको होइन। तर, ति सबै हल्लामै सिमित रहे।
एक्कासी मेसी बार्सामा नरहने खबर बाहिरिएपछि फुटबल जगत तरंगित भयो। बार्सा र मेसीका फ्यानले विश्वास गर्न सकिरहेका थिएनन्। सामाजिक सञ्जालमा फ्यानहरुको रुवाबासी नै चल्यो। यो स्वभाविक पीडा थियो।
तर, पीडामा फ्यानहरु मात्र थिएनन्। बार्साबाट मेसीसँगै खेल्ने खेलाडीहरु पनि उत्तिकै पीडामा थिए। मेसी बार्साको जर्सीमा नदेखिने तथ्य पचाउन सहज थिएन।
तर, जति पीडादायक भएपनि मेसीले बार्सा छाडेकै थिए। त्यो टर्नेवाला थिएन। बार्साले आफ्नो वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमार्फत् मेसी क्लबमा नरहने घोषणा गरेसँगै सबै स्तब्ध भएका थिए। कोही यो विषयमा बोलेका थिएनन्। बार्साका पुराना खेलाडी सर्जियो बुस्केट्सले सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो मौनता तोडेका थिए।
कसले विदाईमा के भने?
मेसी र बुस्केट्स सन् २००८ देखि सँगै खेलिरहेका छन्। त्यसक्रममा उनीहरु तीनपटक च्याम्पियन्स लिग जित्न समेत सफल रहे।
‘तिमिले क्लबका लागि र आफ्ना समकक्षी खेलाडीका लागि यतिका वर्ष जेजति गर्यौ त्यसका लागि मनैदेखि धन्यवाद,’ बुस्केट्सले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘तिमी यहाँ आउँदा बच्चै थियौ, तर इतिहासकै सर्वोत्कृष्ट खेलाडीका रुपमा जाँदैछौ। तिमिले यो क्लबलाई नयाँ उचाईमा पुर्याएका छौ। र, म सधैं गर्व महसुस गर्नेछु कि मैले तिमिसँग खेल्न पाएँ र धेरै पलहरु तिमिसँगै बाँड्न पाएँ। तिम्रो याद सधैं आइरहनेछ।’
‘ला मासियामा आउने सबै खेलाडीको एउटा सपना हुन्छ– तपाईंसँग खेल्न पाउने। म आफुलाई भाग्यमानी मान्छु कि मैले त्यो सपना पुरा गर्न सकेँ,’ फाटीले इन्स्टाग्राममा लेखेका छन्।
‘म ति दुई वर्षका लागि तपाईंलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, तपाईंले मप्रति देखाउनु भएको प्रेमका लागि, तपाईंबाट मैले सिकेका हरेक चिजका लागि। म र मेरो परिवार सधैं तपाईंप्रति आभारी रहनेछौं,’ उनले थप लेखेका छन्।
‘तिमीलाई भेट्न पाउनु र तिमीसँग खेल्न पाउनु मेरो अहोभाग्य हो, तिमीले म र मेरो परिवारप्रति देखाएको सद्भावका लागि धन्य छु। धन्यवाद। आगामी दिनका लागि शुभकामना,’ काउटिन्होले लेखेका छन्।
‘क्यूल, टिममेट र साथी, यी वर्षहरुमा तिमीले जेजति दियौ र गर्यौ त्यसका लागि अहिले धन्यवाद मात्र भन्न सक्छु। आगामी दिनमा जे गर्ने निर्णय लिन्छौ, त्यसमा सफलता मिलोस्,’ जाभीले मेसीलाई विदाई गर्दै भने।
‘संसारकै सबैभन्दा उत्कृष्ट क्लबमा इतिहासकै सर्वोत्कृष्ट खेलाडीसँग ति पलहरु बिताउन पाउनु निकै ठूलो सौभाग्य थियो। मेरो मनमा तिमिप्रति असिम श्रद्धा र सम्मान छ। आजसम्म मैदानमा जति तिम्रो जादु देख्न पायौं, र अझै हरेक हप्ता जति जादु देख्न पाइन्छ त्यसका लागि धन्यवाद बाहेक दिनलाई केही छैन,’ डिउलोफिउले भनेका छन्।
गहभरि आँसु पार्दै मेसीले छाडे बार्सा, पिएसजी जान्ने पक्का
‘मलाई बार्साको असाध्यै माया लाग्छ’ भन्दै स्टेजमा रोए मेसी
Tags: barca, messi, xavi
कसले जित्ला ओलम्पिक फुटबलको स्वर्ण, ब्राजिल या स्पेन ?
ओलम्पिक स्वर्णमा थोम्पसनको ह्याट्रिक